Ukuvavanywa kweMephu yeBentley: Ukusebenzisana ne-ESRI-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Uvavanyo lweBentley Imephu: Ukusebenzisana ne-ESRI
Uvavanyo lweBentley Imephu: Ukusebenzisana ne-ESRI
Ngaphambili sibone indlela yokwenza kunye ne-Microstation Geographics V8, kunye nezinye iindlela zokungenisa iifayile .shp.
Makhe sibone ukuba umhlaba utshintshe njani kwimeko yenguqulo 8.9 eyaziwa ngokuba yiBentley Imephu XM. Indlela yokuyiphatha inamandla kakhulu, ngengqondo yokuba iMicrostation ngoku ingafunda, ihlele, ibize isalathiso ... hayi imilo kuphela kodwa kunye ne-mxd nokunye.
1. Vula ifayile ye .shp
Oku kwenziwa ngokulula nge "fayile / vula" kwaye ukhethe ifomathi ye-shp. Oku kuvula ukufunda-kuphela, kodwa ngokungathi yi-dwg okanye i-dgn.
Bentley wenza kakuhle kakhulu kule ndlela ukuvula iifayile ngqo, ngenxa yokuba ukongezelela .dgn, .dxf kwaye .dwg esele zenziwe, iiseli open (.cel), leyo izithengisayo (.dgnlib), redline (.rdl), 3D Studio iifayile (.3ds), i-SketchUP (.skp), i-Mapinfo (.mif ne .tab ifomathi yemveli) phakathi kwabanye.
Emva kokuba imbobo ivulekile, unako ukuchaphazela izinto njengokungathi imephu eqhelekileyo.
Xa ubukela iiplati zepropati, ungafunda ididf egciniweyo yedatha. wow!
Kwakhona xa usebenzisa umyalelo "wokubhaliweyo", i-xfm ibonisa itafile iboniswa, ilingana nedatha yedatha.
2 Inombolo yesalathisi
Ukwenza "ifayile yereferensi / imenenja yemephu" ingabizwa ngeendlela ezahlukeneyo:
Apha ungabiza iifayile ze-ESRI, ezinje nge .mxd, .lyr kunye .shp. Uncedo lokuyibiza ukusuka apha kukuba ixhasa umxholo onxulunyaniswa ne-mxd ngelixa i-shp elula ishiya ngombala tyaba. Kananjalo ngokubizwa njengomfanekiso ulawulo lokungafihli kunokulawulwa ngokulula.
Le yiphaneli ekhethekileyo, apho ungakhetha khona iiklasi zezinto ezihlukeneyo ukuze uzibonise ngombono ohlukeneyo, okanye kwizicingo ezigcinwe.
Ebizwa ngokuba yi-reference, ungayilawula inketho ye-snap, nangona into ebangel 'umdla kukuba njengoko ikhonkco iphinde isekele iifayile zeMaphufo (.tab kunye .mif).
Ngoko xa ubazisa, unokuvala okanye uvule iimpawu, amaqela, amabala okanye iinkalo zenkalo ngokusebenzisa ipaneli yomphathi wemephu.
3 Gcina ifayile ye .shp
Ifayile inokugcinwa kwiifomathi ezahlukeneyo, dgn, dwg, dxf, dgnlib (dgn library) okanye rdl (redline dgn).
Idatha igcinwe kwifom ye xml, ngaphakathi kwirebe; oko kukuthi, i-dgn iqulethe idatha ... into emangalisayo yokuphunyezwa eyaziwa njengezixhobo ze-xfm.
4. Ukungenisa ngeNtsebenziswano:
Inketho ebizwa ngokuthi ukusebenzisana yinto enye evumela ukudibanisa idatha ekhonjwe nge-datasource: i-ODBC, i-OLEDB kunye ne-Oracle njengoko bekuza kuba yi-ArcSDE okanye i-ArcServer yesevisi.
Enye yeenzuzo zokukwenza ngale ndlela kukuba unokhetha iklasi yeklasi ngokwahlukileyo, ukunikezela uhlobo lohlobo oluza kungeniswa kulolu hlobo lomgca, ukuzalisa, ukungafihli, njl njl. Kwakhona ukuba ngaba uneprojekthi, iimpawu ezikuyo zikhethiweyo.
Oku kwenziwa nge "fayile / imoprt / gis data"
Ngendlela efanayo unokuthumela ngaphandle inkonzo ... eqondakalayo kufuneka ibone umsebenzisi we-ESRI ... ukuba andizange ndizame kodwa ngolunye usuku lwaba baya kuba nexesha.
Akubi, ucinga ukuba unako ukuhlela i-CAD kunye nokusebenzisana ne-ESRI ifom.
Oko ndiye ndakukholiswa
Ikkaro, ukwazi ukuba izinto zenziwa njani
Tivekiki Geographics ukhetho ngaphandle kwifayile imilo, ukuba kunjalo, iifayile ezintathu yayiza udale shp equlathe wew geometry, a shx equlathe isalathisi lwemihlaba kunye .dbf equlathe i data tabular kuquka mslink.
Manuel Flores uthi:
I Geographic 2004 yaye liphuhlise projekthi kunye neemephu cadastral banabo idityaniselwe i ulwazi ne ukufikelela, umbuzo ngulo: kukho indlela ukuthumela into okanye izinto linestring ezinxulumene mslink ezimbini (enye linestring eqhelekileyo ukuba iziza ezibini ) ukuba ArcGIS okanye PostGIS apho unokuba nombono linestring kunye mslink ezimbini nje ngokucofa umba. Ndidinga iimpendulo ngoko nangoko
Ewe, ndicinga ukuba azininzi izinto ezilungileyo ezibhalwe. Ndicinga ukuba ukuba uyazifumana ngokuthe ngqo kwi-Bentley Systems, kufuneka zibonelele ngezixhumanisi kwiiprojekthi okanye kumaziko afanelekileyo kwindawo enokuthi uncedo.
WILLIAM ORLANDO SALAMANCA uthi:
Ndiya kuthenga i-software yeBentley Map, kodwa andinalo uninzi lweencwadi malunga nendlela yokusebenza, ukuqala umsebenzi
Iimagazini ze-3, izihloko ze-3